Great Talooyin ku saabsan sida loo qaab digsi ku Mac / Windows PC iyo Software Faa'iido leh
Haddii aad u baahan tahay in qaab aad disk aad Mac ama Windows PC, halkanu waa meeshii xaq aad u tagto. Talaabooyinka sidii aad qaab disk on Mac iyo Windows PC halkan daboolay. Iyo waxa ka badan, sidoo kale waxaad isku dayi kartaa software halkan ku xusan. Fiiri faahfaahin ka qayb kasta:
Part1: Waa maxay formatting disk?
Qeybta 2: Sida loo qaab digsi ku Computer
Sida loo qaab Disk in Windows 7
Sida loo qaab Disk ee Mac OS X
Sida loo qaab Disk ee Linux
Qaybta 3. software Warqadda formatting disk
Qaybta 1. Waa maxay formatting disk?
Ugu horrayn, by formatting disk / drive, waxaan ula jeednaa habka diyaarinta xijaab qaar ka mid ah drive in loo isticmaalo by Operation System computer ee (OS) ee la tirtiro xogta lagu kaydiyaa oo isticmaalaya meel u dejinta nidaam file cusub. (Link in article hore) Tani waxa muhiim ah sidii ay u saamaxdo your computer in la aqoonsado adag / flash drive cusub, kaas oo dib loo isticmaali karaa kaydinta xogta. Formatting aad OS u saamaxaaya in ay akhriyaan dhismeedka buugga drive ee, la qeexo habka macluumaad waxa loo habeeyey si ku dhaqanka disk.In ah, formatting disk waa badan la mid ah sida la tirtiro dhammaan xogta ka HDD, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in qalliin oo keliya on maran cajaladaha ama dhammaan macluumaadka gurmad u qiimo badan ka hor qaliinka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad nasiib ku filan oo ay qaab disk ah, oo ay ku qoran wax muhiim ah, waxaa weli fursad u heystaan ​​inay dib u hesho macluumaad in, sida ay xaqiiqadu tahay in xogta ayaa weli ku kaydsan HDD, laakiin kaliya ma u muuqdaan in qaab-dhismeedka buugga. Waxaa jira utilities waxtar leh oo badan si ay u qabtaan howlgalkan, tusaale ahaan ' Data Recovery 'by Wondershare ama' Norton Disk Warrior '.
Qaybta 2. Sida loo qaab digsi ku Computer
Si kastaba ha ahaatee, hannaanka kala duwan haddii aad isticmaasho OS kala duwan. Maqaalkan waxa aan kuu sheegi doonaan sida ay u qaab aad drive on Windows 7, Mac OS X iyo Ubuntu.
Thanks for Microsoft, la wado formatting on Windows 7 waa halkii fudud. Just raaci hagitaan talaabo talaabo taas oo dhibaato ah ma waa muuqdaan.
Marka hore, waa in aad furto qalab Management digsi, taas oo ka caawisaa si ay u maareeyaan drives on Windows. Habka ugu fudud ee ay heli waa in aad qortid diskmgmt.msc in bar raadinta.
Marka Management digsi ka furmay (laga yaabaa inay qaadato dhowr ilbiriqsi), dooran drive aad rabto in aad qaab ka mid ah liiska. (In tusaale ahaan waxaan dooran Music drive (E))
Hadda xaq-guji drive la doortay iyo dooran Qaabka (hubiso in ay tahay drive saxda ah!)
Hadda waa wakhtigii la siin doonaa magac cusub si drive ka. In tusaale ahaan aynu u magacaabi - Videos (haddii aad sii magaca asalka ah ee drive - waxba ma ahan).
Next, waxaan dooran nidaamka file our. Mid ka mid ah ugu fiican waa NTFS, si aan u doorato. (More on nidaamka file aad halkan ka akhriyi kartaa).
Ka dib markii in aan u baahanahay in la doorto Size Unit qoondaynta. Waxaan u baahanahay in la doorto Default, sida in tirada ugu fiican ee la soo dooran doono Windows.
Haatan labo ikhtiyaar: in inuu ka tago sax sanduuqa ku xiga si ay u qabtaan Qaabka ah Quick ama in la uncheck. Waxaan ku talinaynaa in ay uncheck, sida in aad OS hubin doonaan drive ka oo dhan khaladaad suurto gal ah iyo in laga takhaluso iyaga ka mid ah. In kastoo, waxay ku qaadan karnaa xoogaa waqti ah. (By default Windows yeelan doontaa sax sanduuqa in, si taxaddar).
Sanduuqa soo dhaafay - sahlo File iyo Folder riixo waxaa la xadidin meelaha by default, si aynu soo shirtagi in ay.
Dib u eeg oo dhan goobaha doortay iyo OK jaraa'id.
Fariin digniin ah ayaa ka soo muuqan doona, kaliya taabo OK.
Ku dhawaad ​​jiraan! Hadda sugin waxaad u doortay disk in qaab. Hel koob shaah ah ama wax ka, sida uu ku qaato muddo ah.
Marka ay gaadho 100%, loo hubiyo xaaladda ku qoran yahay sida Healthy, sida oo dhan drives kale.
Hambalyo! Waxaad kaliya formatted aad drive hore! Hadda waxa uu diyaar u yahay in la isticmaalo.
Ka hor inta aadan bilaabin naga tutorial, waxaa muhiim ah in la xuso in ka duwan Windows, Mac OS X wax badan oo xasiloon nidaam iyo ma jirto baahi loo qabo in qaab aad drive sanadkiiba hal mar ama si si ay dib ugu nidaamka qalliinka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in qaab aad drive Mac sabab qaar ka mid ah (qalab aad iibiso ama kaliya takhalusaya oo dhan software iyo xogta hore in ay dib u bilowdo ka xoq), tutorial tani waxay noqon doontaa waxtar leh oo aad u.
FIIRSO: Hubi in aad kor u taageeray xogta aad ka hor haddii aad rabto in aad u dhawrtaan, sida ma noqon doonto in aad awoodid in dib-u helin si fudud haddii aad si lama filaan ah maskaxdaada beddesho. Haddii aad horay u badiyay macluumaad qaar ka mid ah, waxaa jira qaar ka mid ah software oo caawin kara, tusaale ahaan: " Data Recovery 'ee Mac by Wondershare ama dadka kale qaar ka mid ah.
First of dhan, waxaan u baahan nahay in aan bilowno OS X Utilities. Habka sida aan u sameeyo kala duwan yihiin, waxayna ku xiran tahay version of OS X aad isticmaalayso.
Wixii 10.7 Libaaxa, 10.8 Mountain & 10.9 Mavericks aad u baahan tahay in la qabto furayaasha Command iyo R isku mar, sidii aad u bilaabi X. OS dib markii ay iyaga laftooda 10-15 ilbiriqsi, fursadaha OS X Utilities muuqan doontaa shaashadda.
Waayo, kulli qoraalkii ka hor oo ay ku jiraan OS X 10.6 Snow Leopard, waxaad u baahan doontaa DVD cirrada OS X rakibo (geeyey la your computer Mac) ama DVD ee tafaariiqda ee aad OS X version.
Wixii versions kasta ka hor iyo ka mid yihiin Snow Leopard, geliso DVD ku haboon oo si degdeg ah wax miiran iyo qaban C muhiimka ah, ka dib markii aad maqasho music bilowga ah. Your computer bilaaban doona iyadoo la isticmaalayo software rakibo.
In sanduuqa OS X Utility dooran Disk Utility.
FIIRO GAAR AH: Haddii aad leedahay wax ka badan hal xijaab on drive ay ku adag tahay, waxaa laga yaabaa in aad dooneyso in aad ka saarto, kuwaas oo ku soo celi drive ay adag tahay in la hadlo xijaab hal, marka hore.
Hadda dooro wadid aad u adag in aad u aragto in ka badan fursadaha. Ka dib markii in saxaafadeed button Risaalo.
Dooro 1 Barzakh.
In sanduuqa Barzakh Information ku qor magaca drive cusub adag. (HD Macintosh ku jira tusaale ahaan). Riix Codso ka dib.
Ka dib markii in, guji ah Barzakh, haddii aad ku faraxsan tahay oo dhan goobaha ay yihiin.
In digsi Utility dooran Risaalo oo la abuuray oo keliya. (Top tagay box). Hadda dooro masixi iyo hubi in qaab waa Mac OS la dheereeyey (Journaled). (La doortay waxaa habboon by default)
Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan sida ay aamin aad rabto in aad OS X inay fuliyaan qalliinka. The-off ganacsiga waa waqti, sidaas darteed fursad u sugo, laakiin waxay qaadan karnaa xoogaa waqti ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay taasi aad loogu balan qaaday in mid ka mid ma noqon doonto in la soo celiyo taariikhda awoodi haddii aad rabto inaad iibiso qalabka dib markii ay kaalinta habka formatting ah. Marka aad doorato, OK jaraa'id. Hadda riix masixi.
Ka dib markii aad qaabab drive disk si guul ah, waxaa jira fursado dhowr ah oo uu ka soo xusho, Soo Celinta ka ah Time ee kaabta Machine ama dib X. OS Haddii aad doonayso inaad soo celinayo drive ka gurmad ugu dambeeyey - dooranayaan ugu horeysay. Habka labaad ogolaan doonaa inaad si loo soo dajiyo oo bayaan OS X.
Haddii aad tahay user kibirsan ee Ubuntu, laakiin waxaad weli ma oga sida ay u qaab drive disk ah, waxaan dhab ahaan aad ku talin lahaa in la tixgeliyo doorashada OS kale si loogu isticmaalo mustaqbalka. Hannah, dhalmada oo kaliya, xataa aad u aannu u diyaarinnay Hanuuniye gaaban kaas oo noqon waa waxtar.
1. Marka hore, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo gparted Tababaraha xijaab. Si loo sameeyo, si fudud ku qor 'sudo badnaayeen-ka heli rakibi gparted ee terminal
Ka dib waxa ay ku rakibidda, waxaad u baahan tahay inay daabacaan. Nooca 'sudo gparted'.
Hadda dooran drive ee aad dooneyso in aad qaab ka mid ah liiska
Calaamadee dhamaan goobaha iyo hubi in aad soo xulay drive sax ah!
Press Codso button oo sug
Success! Waxaad kaliya formatted aad drive!
Waxaan samayn ogaadaan in mararka qaarkood geeddi-socodka formatting laga yaabaa kuwo ku adag oo ninna ma uu doonayo in uu halis u badiyay dhammaan xogta haddiiba ay wax ku qaldamaan. Sidaas, waxaannu aragnay in software yar oo waxtar leh oo u oofin karin habka formatting aad u.
Name: HDD Qaabka Heerka Low Tool
Barnaamijka dib-u-khadigtaa drive adag u qora eber byte ah meel kasta oo disk ah. In tababar, waxaa si buuxda oo irreversibly tirtiro aad disk in meesha laga saaro dhammaan xogta ku kharribeen ama cudurka on. Interface waa iska sahlan oo aan u baahnayn aqoon hore. Waxaa la shaqeeyaa hindisooyin badan, oo ay ku jiraan flashcards. In kastoo ay waqti qaadato laga yaabaa in aad drive in formatted, waxaad hubsan kartaa in markaas nadiif bay ahaan doonaan, oo virus / musuqmaasuqa oo lacag la'aan ah.
Name: AOMEI Kaaliyaha Barzakh
Price: edition caadiga ah oo kaliya waa lacag la'aan
Barzakh AOMEI Kaaliyaha Standard caawisaa in ay gacanta ku wadid aad u adag iyo Xaajis Awdan. Tusaale ahaan: saamaxaaya in la kordhiyo tirada xijaab, maareeyaan size disk. Waxa uu isticmaalaa heer qaybta technology ilaalinta xogta, taas oo software kahyraadka ka dhigaysa hadii aad rabto in aad iska iibiso ka dib aad wado. Labada la shaqeeya MBR iyo hanaan disk GPT; size drive ee ma ahan mid ka mid ah - waxa ay u adeegtaa ay ujeedada si siman si fiican u leh cajaladaha waaweyn iyo kuwa yaryar (in ka badan 2TB).
Ajandooyinka: Mac OS X (10.6 iyo ka weyn)
Dareen leh, interface user weli awood badan gelineya inaad si fudud loo abuuro, baabbi'in, resize ama maqaal qoruhu qaab ku cajaladaha adag doortay (gudaha, dibadda, ama go'an saari karo). Waxaa intaa dheer, waxa u ogolaanaya in ay saf dhawr hawlgal in lagu sameeyo si gaar ah. Sidoo kale waxaa jira muujinta a kaas oo awood u barnaamijka si toos ah u habayn iyo qoruhu aad si X OS in ay si fiican u shaqeeyaan.
Vista aan kabaha doonaa: Sidee inaan ku saxno
Sida loo dayactir Certificate baadida Internet Explorer 8
Waa maxay iyo Sida loo dayactir Error Kernel32.dll
> Resource > Utility > Top Talooyin ku saabsan sida loo qaab aad digsi